Tilmaamo loogu raaxeysto xeebta lamaane xagaagan | Ragga Stylish
Daal badan ka dib, bilooyin walaac ka buuxo, ayay yimaadaan fasaxii muddada dheer la sugayey iyo xeebta; Dhexdooda waxaad ku haysataa wakhti aad kaga fogaato magaalada oo aad safar ugu aaddid lammaanahaaga.
Safarka oo sii dheeraada, fursada weyn ee aad laheli karto lamaanahaaga a jawi ka duwan oo ka sii dhow.
Haddii ay dhacdo in joogistu gaaban tahay, waa inaad maanka ku haysaa inaad ku raaxaysato waqtiga ugu buuxda oo aad diiradda saarto abuur waqtiyo wanaagsan con lamaanahaaga.
1 Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu raaxeysto safarkaaga
1.1 Ka tag xaalada xun si aad ugu tagto xeebta
1.2 mid waluba meeshiisii
1.4 Farxad iyo jacayl
Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu raaxeysto safarkaaga
Ka tag xaalada xun si aad ugu tagto xeebta
Markii aad safar la galayso lammaanahaaga waa inaad qaadataa taxaddar lama huraan ah si looga fogaado iska hor imaad dhexmara labada. Fikradda ayaa ah in lagu raaxeysto muran la’aan, waa inaad dhinac iska dhigtaa shaqada ama arrimaha xasaasiga ah, oo aad ogtahay inay bilaabi karaan dagaalka la dajiyay
mid waluba meeshiisii
In kastoo fikradda safarku tahay inaad waqti la qaadato lamaanahaaga, haddana way fiicantahay inaad yeelato daqiiqado kalinimo.
Waa inaad xusuusnaataan inaad labadiinuba ka timaadeen inaad bilooyin ku qaadateen cadaadis iyo culeys, waana wax aad u wanaagsan Abuur boos aad kali ku ahaato, maskax nadiif ah iyo is arag. Socodka wanaagsan ee xeebta waa dib u soo celin.
Raadi hawlo cusub oo asal ah in safarka loogu daro madadaalo iyo isbadal la'aan. Qaar ka mid ah cayaaraha biyaha, sida quusitaanka ama dabeylaha, ama xitaa ku soo dhowaanshaha xeebta, ayaa abuuri kara taas saamayn adventurous Maxaad raadineysaa.
Waxa kale oo aad ku dhowaan kartaa soo dhaweynta hoteelka oo weydiiso baakadaha ama waxqabadyada u dhow dalxiisayaasha. Mararka qaarkood hagaajinta ayaa miro dhalinkarta miro dhal.
Farxad iyo jacayl
Xusuusnow in fasaxyadu yihiin kuwa ka mid ah dhowr jeer oo aad kartid cadaadis la'aan la noqo lammaanahaaga. Abuur goobo si aad dib ugu howlgeliso jacaylka iyo xiisaha. Waxaad ku sharxi kartaa safar caadi ah oo dayax gacmeed iyo casho ah, ama doon yar oo lagu raaco xeebta. Waxa ugu muhiimsan, marka la sameynayo qorshe jaceyl, ayaa ah tixgeli dhadhanka lamaanahaaga. Habkaas, qalad kuma dhici doontid.
Ilaha sawirka: Teknolojiyada bulshada / María Jesús Álava Reyes Foundation
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee loogu raaxeystaa lamaanahaaga xeebta?
Dayrta ayaa imaanaysa tifaftirka cusub ee Reiss